Sraa’iil oo duqayn xagga cirkaa ku dishey sarkaal sare oo ka tirsanaa Xamaas!!! | Somaliland.Org
Sraa’iil oo duqayn xagga cirkaa ku dishey sarkaal sare oo ka tirsanaa Xamaas!!!
November 15, 2012	Gaza, Israa,iil ayaa duqayn xagga cirkaa ku dishey taliye sare oo ka middaa garabka mulateri ee Gaza, ka dib markii Israa,iil ay garaacday bartilmaameedyo dhowra oo ku yaala aagaasi, taasi oo ay keentay xaaladda kacsan ee halkaasi ka jirta iyo murankii israa,iil afar sano ka hor. Hadaba dilitaanka Axmed Jabari ayaa noqonaysa calaamad daran iyo soo celinta Siyaasadda Israa,iil ee dib u bilaabidda hoos u dilka hogaamiayaasha falastiiniyiinta. mulateriga Israa,iil ayaa sheegay in arintani tahay bilow hawl gal weyn iyo dhaleeco tiirka difaaca. Falastiiniyiinta ayaa iyaguna ku baaqay aargoosi daran, taasi oo kumanaan cadhaysani ay ku qaylinayeen (Aargoosi) iyo inay duqeeyaan Tel Aviv caawa/shalay. Duqaynta ayaa dhacday ka dib markii dhamaadkii wiigan Gaza laysku weydaarsadey madaafiic, taasi oo duqaynta Israa,iil ka dhigeysa mid soo afjaraysa arinta, dagaalkan Israa,iil ayaa laga yaabaa inuu dib u dhaliyo dagaal.
Gaza ayaa si xoogan hawda looga duqayn doonaa, waxayna ciidamaddu sheegeen in diyaarahada dagaalku bartilmaameedsan doonaan ilaa labaatan adeegyadda wax lagu kaydiyo ama goobaha laga soo ridaayo madaafiicda, hubka duqayntaasi lagu burburiyeyna waxaa ka midda madaafiic awoodi karta inay haleelaan intay ugu fogtahay 25 miles (40km) gudaha Israa,iil.
Xamaas ayaa ku baaqday xaalad degdega gudaha Gaza, waxayna dhamaan cidlaysay daaraha xarumaha u ah, halkaasi oo ciidanka Gaza goobo durugsan la geeyey. Mr Jabari ayaa ahaa mid ka midda saraakiisha ugu saraysa xamaas ee la diley tan iyo dagaalkii u danbeeyey ee Gaza intuu uu dhamaaday horaantii 2009, waxaanu ka mid ahaa liiska buxnaha ugu sareeya ee Israa,iil inta badan doonaysey, waayo waxaa lagu xidhiidhiyey weeraro dhimasho geystey oo ay ka mid ahaayeen afduubiddii askari Israa,iiliya oo la odhan jirey Gilad Schalit in 2006.
Marka lagu daro Mr Jabari, sagaal qof oo kale ayaa lagu diley duqayntaasi oo sadex ka midda la xaqiijiyey inay ka mid ahaayeen Xamas, laba caruura iyo inta kale oo weli aan cadayn aqoonisgooddu, sidaasina waxaa yidhi sarkaal dhinaca caafimaadka oo ka hawl galla Gaza Ashraf al-kidra. Ilaa sodoneeyo kalena waxaa ka soo gaadhey dhaawac. Raysal wasaaraha Israa,iil ayaa sheegay in ciidamaddu si balaadhan ugu diyaar garoobayaan hawl galka ay kaga dhan yahiin bartilmaameedyadda Xamaas ee Gaza. Benjemin Netanyahu ayaa yidhi uma dulqaadan karo madaafiidda lagu weerarayo muwaadiniintayadda. Falastiiniyiinta ayaa jawaab madaafiica ku jawaabey, Ciidamadda Israa,iil ayaa sheegay in nidaamkoodda difaaca ee diyaaradaha xadiidkaa ee aan cidina wadini joojiyeen ilaa 13 madaafiica oo Gaza laga soo tuuray. Saxaafadda Israa,iil ayaa iyaduna sheegtay in madaafiicdaa lagu soo ridey korka caasimadda Beersheba.
Dowladda Masar ayaa u yeedhatay qunsulkii u fadhiyey Israa,iil, iyagoo kaga jawaabaaya weerarkaa duqayntaa ee Israa,iil. Iyadoo maamulka maraykanka ee Barack Obama uu taageero buuxda Siiyey Israa,iil iyo duqaynta ay ka geysatey Marinka Gaza. dhanka kale, Golaha Amaanka ee Qaramadda Midoobey ayaa si degdegga oo khaasa kulan ka yeelan donna talaabadda ciidan ee Israa’iil, kalfadhigan albaabadu xidhanyahiin ee habeenkii Arbacadda ayaa ka dhashay waraaq ka timid wakiilka Masar Muutaz Khaliil.
Previous PostMagacaabistii Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe Sadex aan wada socon: Qormadii: 23aad.Next PostMadaxeynaha Somaliland Oo dib ugu soo laabtay Hargeysa	Blog